အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာ - 2
စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာ - 2
စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာကို ဖန်တီးနေသူများအကြားတွင် ထင်ရှားသောသူတစ်ဦးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုပါသည်။ ထိုသူမှာ 1953 ခုနှစ်တွင် Paris မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သော ရုက္ခဗေဒနှင့် မြေခင်းဗိသုကာပညာရှင် Patrick Blanc ပင် ဖြစ်သည်။
ရုက္ခဗေဒပညာရှင် Patrick Blanc သည် Subtropical Forests မှ အပင်များ၏ သဘောသဘာဝကို အထူး လေ့လာသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းသို့ Vertical Garden များကို ခေါ်သွင်းလာခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ သစ်ရွက်လေးများနှင့် အပင်ငယ်လေးများကို ပန်းချီဆရာတစ်ဦးပမာ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်း၍ အစိမ်းရောင် တံတိုင်းကြီးများကို ဖန်တီးခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ သူ၏ အစိမ်းရောင် တံတိုင်းများနှင့် အစိမ်းရောင် နံရံများသည် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအတွင်းတွင် စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်ဆန်ဆန် ကွဲထွက်ထင်ရှားနေတတ်ပြီး မြို့ပြလူမှုဘ၀ကို တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။
Patrick Blanc ဖန်တီးခဲ့သော အစိမ်းရောင် တံတိုင်းနှင့် နံရံလေးများကို ဒီနေရာ လေးမှာ သွားပြီး ကြည့်နိုင်ပါသည်။ သူရဲ့ Project အသေးစိတ်ကိုဖြင့် Patrick Blanc ရဲ့ Website လေး (Link) မှာ လေ့လာနိုင်လေသည်။ အောက်မှာတော့ သူ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အပိုင်းအစအချို့ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုပါသည်။
London မြို့၏ အချက်အချာကျသော Mayfair District တွင်ရှိသော Athenaeum Hotel သည် Patrick Blanc ၏ ဖန်တီးမှုများအတွင် ထင်ရှားသောလက်ရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထို ဟိုတယ်၏ ရှစ်လွှာအထိ အစိမ်းရောင် နံရံကြီးကို ဖန်တီးထားပြီး ထိုနံရံအတွင်းတွင် အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၆၀ ခန့် ပါဝင်လေသည်။
ထို့အတူ 2006 ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Quai Branly Museum သည်လည်း Patrick Blanc ၏ ထင်ရှားသော လက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစိမ်းရောင်အပင်တစ်ချို့သည် လှုပ်ရှားသက်ဝင်နေသော ကင်းဗတ်စတစ်ချပ်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာသည်။ မြင့်မားသော ပြတင်းများသည် အတွင်း Interior နှင့် အပြင် Exterior ကို သိသာစွာ ကွဲပြားခြားနားထားစေရန် ဖန်တီးထားသကဲ့သို့ ထင်ရလေသည်။ Patrick Blanc ၏ နံရံများသည် မြို့ပြလူနေမှုဘ၀မှ မွန်းကြပ်မှုများကို ဖြေဖျောက်ပေးနိုင်သော ဆေးတစ်ဖုံနှင့်လည်း တူသည်။ လန်းဆန်းမှုများကို ပေးသည်။ အစိမ်းရောင် အစအနများသည် နွမ်းနယ်မှုများကို တဖြည်းဖြည်း ဝေးသွားစေသည်။
Blanc နှင့် အတူ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော Jean Luc Gouallec က အစိမ်းရောင်တံတိုင်းများအတွက် Frame ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ထို Frame အတွင်း အပင်များ စနစ်တကျ ထည့်သွင်းစိုက်ပျိုးရန်ခြင်းသည် သူတို့ ဖန်တီးမှုများ၏ အဓိက အရေးကြီးသော အခြေခံအချက်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ တစ် စတုရန်းမီတာအတွင်းတွင် အပင်ပေါင်း ၃၀ ခန့်ကို စနစ်တကျ ထည့်သွင်း စိုက်ပျိုးရလေသည်။ ထို့အပြင် ဒီဇိုင်းဖန်တီးမည့် အပင်မျိုးစိတ်များကိုလည်း စနစ်တကျ ရွေးချယ်ရသေး၏။ Vertical Garden များကို Blanc စတင်ဖန်တီးခါစက ကလေးဆန်ဆန် အတွေးများနှင့် စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နောင်တွင် သူသည် Paris ရှိ National Centre of Scientific Research တွင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အပင်များကို သဘာဝ မြေဆွေး မြေသြဇာနှင့် ဓါတ်မြေသြဇာများဖြင့် ပျိုးထောင်ခြင်း မဟုတ်ပဲ အပင်အားဖြည့် အရည်များဖြင့် မြေမဲ့ စိုက်ပျိုးခြင်းကို ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကမ္ဘာအနှံ့ကို ခရီးသွားပြီး အပင်မျိုးစိတ်များကို လေ့လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သူသည် ကမ္ဘာအနှံ့ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို သင့်လျော်လျောက်ပတ်သော အပင်များကို ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး Green Wall အမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။
Blanc ၏ Vertical Garden များသည် အခြား ဥယျာဉ် ပန်းခြံများကဲ့သို့ မကြာခဏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် မလိုအပ်ပဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အနည်းငယ် လိုအပ်ရုံဖြင့် လုံလောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချက်သည် သူ၏ Vertical Garden များကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုလိုသူများကို ဖမ်းစားသော အချက်လည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ အတိုက်အခံ တစ်ချို့ကတော့ Blanc ၏ Vertical Garden များသည် အစိမ်းရောင် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုသာ ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး Sustainable Design မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ Jean Luc Gouallec ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအတွက် မှန်ကန်သော အပင်များကို စနစ်တကျ ရွေးချယ်ခဲ့လျှင်၊ စနစ်တကျ ပြုပြင် စိုက်ပျိုးဖန်တီးခဲ့လျှင်ဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့ မည်သည့် နေရာတွင်မဆို Green Wall များကို ဖန်တီးနိုင်ကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Blanc ဖန်တီးခဲ့သော ကမ္ဘာအနှံ့မှ Project များသည် သူ၏ စကားများ မှန်ကန်ကြောင်းကို ညွှန်းဆိုနေလေသည်။
Blanc ခံစားမိသော အစိမ်းရောင်အတွေးသည် ကျွန်တော်တို့ ခံစားမိသည့် ရနံ့တော့ ကွာခြားပါလိမ့်မည်။ သေချာသည်ကတော့ Blanc ၏ Green Wall များသည် Sustainable Design အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အဖြေတစ်ခု မဟုတ်သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း အစိမ်းရောင်ကမ္ဘာကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာ အားဖြည့်နေသော ပြယုဂ်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းတော့ အားလုံး လက်ခံထားရလေသည်။
d+A design and architectural magazine. Issure 058 _ 20101
[ စကားချပ်။ ။
မွေးနေ့လက်ဆောင် ဒုတိယပိုင်းကို ခုမှ တင်လိုက်ပါတယ်။ တကယ်က လက်ဆောင်ရတဲ့ စာအုပ်က စာတွေကို ပြန်ပေးလိုက်တာပါ။
နောက် Technical Detail တွေကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သီးသန့် Reference စာအုပ်တွေမှာပဲ လိုက်ဖတ်တော့နော်..။ :P ]
အစိမ်းရောင် တံတိုင်းတွေကိုကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ် မျက်စိအေးတယ်.
အစိမ်းရောင်တွေ ရှားပါးလာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးအတွက်တော့ ကျေနပ် ၀မ်းမြောက်စရာပါဘဲလေ.
ဒီလို အစိမ်းရောင်နံရံတွေ တံတိုင်းတွေ အများကြီးပေါ်လာရင် သိပ်ကောင်းတယ်နော်။
အဲဒီ အပင်တွေနဲ့ စိမ်းနေတဲ့ တံတိုင်းတွေကို သဘောကျတယ် .. ဒါပေမယ့် မြွေတော့ တွေးကြောက်ပြန်ရော :D